C/kariin Xuseen Guuleed oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan Maamulka Gobolada Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirkii hore ee Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa maanta kaga dhawaaqay magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud inuu yahay musharax u taagan xilka Madaxweynaha Maamulka Gobolada Dhexe, kadib munaasabad ay ka qeyb galeen odayaasha dhaqanka, siyaasiyiin, mudanayaal ka tirsan Baarlamaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada
Munaasabada oo aheyd mid si aad ah loo soo agaasimay ayaa xubnihii ka qeyb galay ay soo dhoweeyeen musharaxnimada Mr Guuleed, iyadoo madasha lagu soo bandhigay Sawirka musharaxa iyo ciyaaro dhaqameed.
C/kariim Xuseen Guuleed oo munaasabadda ka jeediyay khudbad ku aadan waxqabadka uu doonayo inuu ka fuliyo gobollada dhexe hadii loo doorto xilka Madaxweyne ayaa sheegay inuu xooga saari doono soo celinta Amniga iyo kala dambeynta.
“Waxaa xooga saari doonaa hadii la ii doorto xilka Madaxweynaha Maamulka Gobolada Dhexe, soo celinta Amniga, kala dambeynta, xoreynta deegaanada wali gacanta ugu jira Al-Shabaab, la dagaalanka burcad badeedka, dib u heshiisiin ka dhaqan gasha degmo ilaa heer tuulo”ayuu yiri C/kariin Xuseen Guuleed.
Sidoo kale Musharax C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in hadii la doorto uu soo dhisi doono Xukuumad tayo leh oo wax ka bedesha xaalada gobollada Dhexe, arrimaha caafimaadka dhamaan deegaanada, sare u qaadida waxbarashada, arrimaha xuquuqda aadanaha iyo gacan siinta dadka laga tirada badan yahay.
Nabadoon Maxamed Xassan Xaad oo ka mid ahaa odayaashii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in C/kariim Guuleed barnaamijka siyaasadeed ee uu soo bandhigay uu yahay mid wax badan ka bedeli kara xaaladda gobollada dhexe.
Xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon oo ka mid ah xunaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed muwaadin horumarin ku sameyn kara gobollada Mudug iyo Galguduud.
Ugaas Maxamed Bashiir o ku hadlayay magaca dhaqanka Soomaaliyeed ayaa ku amaanay musharaxa cusub inuu kaalin weyn ka qaatay intii lagu gudo jiray burburka waxbarida dhallaanka Soomaaliyeed.
C/kariin Xuseen Guuleed ayaa horay loo saadaalinayay inuu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Gobollada Dhexe, waxaana lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay mid ka mid ah musharaxiinta ugu cad cad xilka Madaxweynaha Maamulka Gobollada Mudug iyo Galgaduud.